Madaxa HAAB ee JWXO Mudane Sheikh Diirane oo Magaalada Port Elizabeth si diiran loogu soodhaweeyay bulshada qaybaheeda kaladuwana kulamolayeealn doona.
Dec 6, 2012 (QOL) Wafdi uu hogaaminaayo Madaxa Hogaanka Abaabulka & Arimaha Bulshada iyo A Jabhadda Wadiniga Xoreynta Ogaadeenya (JWXO) Mudane Sheikh Maxamed Cabdi Yaasin (Diiranae) dhawaanahanba ku sugnaa wadanka Koonfur Afrika ayaa maanta ka dagay garoonka diyaaradaha Magaalada Port Elizabeth ee xarunta Gobolka Eastern Cape islamarkaana ah xarunta Jaaliyada Ogaadeenyab ee Koonfunta Afrika.
\_Masúulka oo siheer sare ah wadankaas loogu qaabilayay waxaa safarkiisa PE ku wehelinayay Magaalada Johannesburg kaga hor tagay Madaxa Hogaanka Abaabulka & Arimaha Bulshada ee Jaaliyada Ogaadeenya ee Koonfun Afrika Halgame Daahir Axmed ( Korneyl Cadde), wafdigan waxaa si wanaagsan u soo dhaweeyay Mas'uuliyiin ka tirsan Jaaliyada Ogaadeenya oo uu horkacaayay Gudoomiyaha Jaaliyada Ogaadeenya Halgame Bashiir Muxumed. Mudane Sheikh Maxamed Cabdi Yaasiin (Diirane) ayaa shirar waa weyn ku qabtay Magaalooyinka Johannesburg, Pretoria & Magaalooyin kale oo wadanka Koonfur Afrika ka mida ah, Masúulka ayaa shirkiisa ugu horeeya ku qaban doona Magaalada Uitenhage Maalinta Jumcaha oo barito ah 07/12/12 waxaana la rajaynaya inay dad badani kafaa'iidaysan doonaan.
Mudane Sheikha Diirane ayaa ah rug cadaa ku xeel dheer arimaha guud ahaan Geeska Afrika gaar ahaan Ogaadeenya waana waayo arag goob joog ka ahaa 3 dii Halgan ee qori isu dhiibka ahaa ee dhamaantood xoraynta Ogaadeenya loo abuuray halgamadaas oo uu ugu dambeeyayay uguna facweynyahay midkamaanta socda ee ay JWXO majaraha u hayso sheikhuna uu Mas'uuliyiinta ugu saraysakamid yahay.
Shirarka uu Mudane Sheikh Diirane qaban doono wararkeena dambe kala soco hana ka dheeraanin Qorahay Media oo marwalba warar hufan kaa haqab turaysa.
Khayr iyo Barako
PE, Koonfur Afrika